राजनीति – Page6– .:: Welcome to Saurahaonline.com
सरकारको नीति “योर च्वाइस इज फस्र्ट” : प्रम ओली (ससद सम्बोधनको पूर्ण पाठ) २२ पुष २०७५, आईतवार १६:२४
काठमाडौं, २२ पुस । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओेलीले देशमा महंगी घटेको दाबी गरेका छन्। उनले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष महंगी घटेको दाबी गरेका हुन्। प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै आज प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्ष ४ दशलम २ प्रतिशत महंगी थियो..
दीपक मनाङेको सपथ ग्रहण रोकियो
पोखरा २२ पुस । दीपक मनाङेलेको सपथ ग्रहण रोकिएको छ । गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले कानुन अनुसार सपथ गराउन नमिल्ने निश्कर्ष निकालेपछि उनको सपथ रोकिएको हो । सोमबारदेखि सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनको कार्यसूचि तयार पार्न बसेको कार्य..
विपक्षी दलमाथि प्रधानमन्त्रीको प्रहार, पानी धमिलो बनाएर माछा मार्ने प्रयास नगर्नुस्
काठमाडौं, २२ पुस । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओेलीले देशमा महंगी घटेको दाबी गरेका छन्। उनले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष महंगी घटेको दाबी गरेका हुन्। प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै आज प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्ष ४ दशलम २ प्रतिशत महंगी..
प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न नपाएपछि संसदमा कांग्रेसको अवरोध
काठमाडौँ, पुस २२। प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले सम्बोधन गरेपछि प्रश्न गर्न नपाएको भन्दै प्रतिपक्षले विरोध गरेका छन् । आइतबारको संसदमा सुरुमै प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेका थिए । सभामुख महराले सरकारको काम कारवाहीका..
सरकारले बेरोजगार भत्ता दिन्छ : सभापति डल्लाकोटी
चितवन, २२ पुस । जिल्ला समन्वय समितिका सभापति कृष्णकुमार डल्लाकोटीले सरकारले सरकारले प्रदान गर्ने बेरोजगार भत्ताको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । उनले काम गर्न सक्नेलाई स्वरोजगार र नसक्नेलाई बेरोजगार भत्ता दिने बताएका छन । राप्ती ७..
मनाङबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङ्गेले आज सपथ लिँदै
काठमाडौं,२२ पुस । ज्यान उद्योगमा मुद्वा खेपीरहेका मनाङ जिल्लाबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद् दीपक मनाङ्गले आइतबार सपथ लिने भएका छन्। प्रदेशसभा सांसद्‍का रुपमा सपथ लिनका लागि आइतबार बिहानै उनी पोखरा जाने तयारीमा रहेको मनाङ्गेको..
कांग्रेसको नेतृत्व परिर्वतन गर्नुपर्छ : महामन्त्री कोइराला २१ पुष २०७५, शनिबार १६:४१
रत्ननगर, २१ पौष । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले कांग्रेसको नेतृत्व परिर्वत गर्नुपर्न बताउनु भएको छ । नेपाली कांग्रेस रत्ननगर कार्यसमितिले शनिवार टिकौली चौरमा आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट,सम्मान तथा वनभोज कार्यक्रमलाई..
चितवनबाट प्रेस युनियनको केन्द्र र प्रदेश अध्यक्षमा अग्रज पत्रकार दिपक र नारायण सिफारिस
तिवन, २१ पुस । नेपाल प्रेस युनियन चितवनले केन्द्र र प्रदेश अध्यक्षमा दुई जनाको नाम प्रस्ताव गरेको छ । प्रेस युनियन चितवनका अध्यक्ष अनिल ढकालले चितवनका दुई अग्रज पत्रकारलाई केन्द्र तथा प्रदेशस्तरको अधिवेसनमा अध्यक्षका उम्मेदवारका रुपमा..
कहिले आउला त द्वन्द पिडितको अनुहारमा खुसी ? दराजमै थन्किए ‘द्वन्द्वका घाउ’
सुर्खेत, पुस २१ । पीडितलाई न्याय दिलाउन गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले साढे दुई वर्षअघि वीरेन्द्रनगरमा मुकाम कार्यालय स्थापना गरेर पीडितका उजुरी संकलन गरेको थियो। त्यसक्रममा कर्णालीबाट तत्कालीन विद्रोही र राज्य पक्षबाट पीडित भएको र..
नेकपा एकीकरण गोप्य खाका बनाउँदै एकीकरण कार्यदल
काठमाडौं,२१ पुस । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० को एकीकरण कार्यदलले बाँकी कामको गृहकार्य गोप्य रुपमा अघि बढाएको छ । संगठनात्मक एकता तथा एकीकरणका सम्बन्धमा गठित नौ सदस्यीय कार्यदलले गृहकार्य सुरु गरेको हो । ललितपुरको एक होटलमा शुक्रबार..